Baillie Gifford: Sanduuqa EAFE
Mawduuca: Gaadiid nadiif ah, Hufnaanta Tamarta
Bandhigga kobcinta suuqyada Mareykanka ee aan horumarin ee Maraykanku wuxuu ka tarjumayaa Baillie Gifford 'caddaynta inay tahay "maaha ganacsigga dayactirka xun ama celceliska, dooranaya halkii lagu maalgeli lahaa dadaal weyn oo lagu aqoonsanayo kuwa aan caadiga ahayn."
$ 60 milyan; laga soo bilaabo 2010
Tan iyo markii aan markii hore maalgelinay sanduuqan, Baillie Gifford waxay ku jirtaa qiimeyn ku saabsan khatarta deegaanka iyo kheyraadka (ESG) iyo fursadaha hannaanka maalgashigeeda, waxaana hadda jira koox 13 ah oo diiradda saaraya maamulka iyo sii jiritaanka. Sannadkii 2017, waxaanu aqoonsannay in maamulahani uu ka fekeray khatarta ganacsiga aan caadiga aheyn oo ay la socdaan hawlgalka McKnight.
Soo Celinta Lacagta: Dib u soo celinta khatarta ugu wanaagsan ee la beddeli karo; portfolio of $ 97 million sida Q2: 2018.
Saamaynta Bulshada & Deegaanka: Baillie Gifford wuxuu xoojinayaa xiriirka dhow ee maareynta shirkadaha, isaga oo isku xiraya wakiillada firfircoon ee codeynta wadahadal ku saabsan arrimaha bulshada iyo deegaanka. Mawduucyada waxaa ka mid ah koriinka gaadiidka shirkadaha baabuurta, waxtarka tamarta ee alaabooyinka leh shirkadaha warshadaha iyo waxyaabo kale oo badan. Miisaaniyadani waxay ka fogaatay shirkadaha shidaalka iyo gaasta tan iyo sannadkii 2013, shirkadaheedana waxay soo saartaa gaasaska qulqulka aqalka dhirta oo aan ka yarayn hal dollar oo iib ah marka loo eego shirkadaha caqligalka ah.
Nidaamka ESG wuxuu soo saaraa natiijooyin kala duwan oo loogu talagalay maamulayaasha sanduuqa. Waxaa laga yaabaa inaan madaxa u xayirno magacyo gaar ah oo aan ku habooneyn mudnaanta gaarka ah ee McKnight, sida Ferrari. Si kastaba ha noqotee, maalgashadayaasha sinnaanta dadweynaha, waxaan rabnaa maareeyayaasha fahmaya dhibaatooyinka joogtaynta. Dhawaan ayaa sanduuq iibsaday Aggrekko, oo ah shirkad soo saarey koronto-yaqaano ku-meel-gaadh ah (oo badi naaftada naaftada ah), oo ku daray Umicore oo ganacsigiisu yahay dib-u-warshadaynta iyo qalabka korontada. Kala duwanaanta fikradda ESG-ga waxay soo saartaa maalgashiyo kala duwan, taas oo u fiican raali gelinteena.